Wararka Maanta: Isniin, Aug 13, 2012-SHARIIF XASAN: "Haddii xilka Madaxweynenimo la ii doorto Soomaaliya waxaan ku maamulayaa Cadaalad"
Shariif Xasan ayaa hadalkan ka sheegay xaflad uu kaga dhawaaqayay inuu yahay murashax oo Axadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, wuxuuna noqonayaa mas'uulkii ugu dambeeyay madaxda sare ee dowladda KMG ah oo ku dhawaaqa inuu yahay murashax madaxweyne.
"Dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad, inuu dhibaatada ka baxana waxay ku xiran tahay in cadaalad uu helo," ayuu yiri Shariif Xasan oo hadal kooban ka jeediyay xafladda murashaxnimadiisa.
Sidoo kale, Shariif Xasan wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii ay Soomaaliya horumar ku gaari lahayd, isagoo xusay inuu ka shaqeyn doono dib u heshiisiinta iyo sidii ay shacabka Soomaaliyeed gacmaha isku qabsan lahaayeen.
Mas'uuliyiin isugu jiray xildhibaanno, wasiirro iyo mas'uuliyiin ka socda xisbiyada qaar ka mid ah asxaabta dalka ka jira ayaa sheegay inay taageersan yihiin Shariif Xasan ayna la dhacsan yihiin murashaxnimadiisa, balse ma aysan sheegin inay kaslooni ku qabaan hadalkiisa ah inuu dalka ku hoggaamin doono cadaalad haddii la doorto.
Afhayeenka baarlamaanka ayaa waxaa looga bartay inuu muran abuuro markii ay madaxda Soomaalidu heshiis gaaraan, waxaana dhowr jeer oo arrinta la weydiiyay uu sheegay inuusan isagu ahayn qof caqabad ku ah horumarka Soomaaliya.
"Waxaan xilka madaxnimo ee Soomaaliya isku taagay markii aan arkay in dalkan uu u baahan yahay in cadaalad lagu hoggaamiyo, waxaana qabaa inaan anigu hoggaan cadaalad ah u horseedi karo Soomaaliya," ayuu Shariif Xasan ku yiri khudbadiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya, Sharii Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ayaa iyaguna horay ugu dhawaaqay inay yihiin murashaxiin u taagan xilka madaxnimo ee Soomaaliya, iyadoo ay sare u socoto murashaxiinta xilka isku soo taagaya.